Ahoana ny fomba hanokafana famoahana rongony any New Mexico
Ny New York Legislature dia nifidy ny hanome ara-dalàna ny rongony fialam-boly amin'ny alàlan'ny volavolan-dalàna faha-2 nolanian'ny komity roa trano.
Ny volavolan-dalàna, tohanan'ny Reps Javier Martinez, Andrea Romero, ary Deborah A. Armstrong dia nandany ny Komity momba ny fahasalamana sy ny asa mahaolona tamin'ny 15 feb ary nandany ny komitin'ny House of Taxation and Revenue tamin'ny 24 feb. nandany ny Antenimieran-doholona tamin'ny vato 31-22.
Niverina tao amin'ny Trano izy avy eo, izay nankatoavin'io ny 38–32 teo aloha, ho fandinihana ny fanovana nataon'ny Senat. Ity vato ity dia nolaniana tamin'ny alàlan'ny latsa-bato.
Ny fivarotana antsinjarany ara-dalàna dia voalahatra hanomboka amin'ny 1 aprily 2022
Manokatra dispensary rongony any New Mexico
Fotoana ho an'ny fizotry ny fahazoan-dàlana
Ny Diviziona Fanaraha-maso ny rongony dia hanomboka hanaiky sy hikirakira ny fangatahana fahazoan-dàlana New Mexico Cannabis mifanaraka amin'ny fandaharam-potoana manaraka:
1 septambra 2021: mpamokatra rongony; orinasa bitika mpamokatra rongony sy olon-kafa manana fahazoan-dàlana ara-dalàna ary manana toerana tsara toy ny mpamokatra rongony manana fahazoan-dàlana mifanaraka amin'ny lalàna Lynn sy Erin Compassionate Use Act.
Janoary 2022: Fahazoan-dàlana hafa rehetra.
Ny Cannabis Control Division (CCC) dia kasaina hamolavola drafitra hampirisihana ny fahasamihafana ara-poko, ara-poko, lahy sy vavy ary samy hafa ara-jeografika eo amin'ireo manana fahazoan-dàlana alohan'ny 1 Janoary 2022.
Makà fahazoan-dàlana ho an'ny rongony any Mexico vaovao
Azonao atao ny manamarina ny antsipiriany momba ny fomba hahazoana a New Mexico lisansa cannabis Eto. Nahazo a ny fahazoan-dàlana rongony dia azo inoanay sarotra sy lafo. Ankoatr'izay, mazàna dia misy fepetra hentitra ho an'ireo tompona dispensary ho avy.
Ankoatry ny fahalalana rongony mivantana, ny ekipanao dia tsy maintsy manam-pahalalana amin'ny lohahevitra maro. Izany dia satria misy lohahevitra maro heverina ho ilaina amin'ny fampandehanana orinasa rongony, ary ny banga fampahalalana rehetra dia hanohintohina ny fahombiazana maharitra.
Fepetra takiana manokana any Mexico - Azonao atao ny manisy antsipiriany momba ny fandrakofana ny rafitra fiarovana anao, ny fitaterana vokatra azo antoka, ny fanarahana ny vokatra, ny drafitra fako ary ny zavatra takian'ny fanjakana hafa. Mariho fa mety tafiditra ao anatin'ny fangatahanao ireo.
Miaraka amin'ny antony manosika sy fidirana amin'ny loharano ilaina, ny biraonay dia afaka manampy anao amin'ny fomba mahomby manomboha dispensary rongony mahasoa ao New Mexico. Na dia zava-dehibe aza ny manamarika fa ity dingana ity dia mitaky fotoana na dia manana ny enti-manana aza ianao.